Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Voafidy ny filoham-pirenena vaovao SKAL International Krabi
Ny filoha lefitra SKAL Iraisam-pirenena Thailandey Kevin Rautenbach dia
voafidy ho filohan'ny SKAL International Krabi
Kevin Rautenbach dia nanendry ny filoham-pirenena vaovao SKAL International Krabi
Ny mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraka sy ny solontena dia nanendry ireo mpikambana vaovao ao amin'ny komity ho an'ny 2021-2023 amin'ny fivoriana fanao isan-taona
Ireo mpikambana vao notendrena dia hamita ny toerany mandritra ny roa taona hatramin'ny 2023.
voafidy ho filohan'ny SKAL International Krabi.
Ny mpikambana ao amin'ny komity mpanatanteraka sy ny solontena dia nanendry ireo mpikambana vaovao ao amin'ny komity ho an'ny 2021-2023 amin'ny fivoriana fanao isan-taona Skal International Krabi. Ny fivoriana ankapobeny isan-taona dia natao tao amin'ny Club House of Port Takola Yacht Marina any Krabi narahin'ny tambajotra tao amin'ny eMV Sunseeker.
Ireo mpikambana vao notendrena dia hahavita ny asany mandritra ny roa taona hatramin'ny 2023. Ny tetik'asa roa lehibe ataon'izy ireo dia ny fanitarana ireo tetik'asa fiompiana misy azy ireo, ao amin'ny saha fizahan-tany maharitra ary miaraka amin'ny SKAL International Thailand ny fampielezan-kevitra #rediscover Destination Marketing ho fanohanana ny orinasa mpikambana. #rediscoverkrabi #rediscoverthailand
Ny Komity Mpanatanteraka enina mpikambana dia mandrafitra ny veterans indostrialy ary koa ny sasany amin'ireo tanora matihanina amin'ny sehatry ny fizahan-tany manan-talenta.
Andriamatoa Rautenbach dia manam-pahaizana momba ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny ary mpandraharaha manana finiavana amin'ny fanavaozana sy fanaovana nomerika ny sehatry ny fandraisana vahiny. Ny famindran-toerana asa 17 taona lasa izay dia nitondra azy tany Thailand izay nody hatramin'izay.
Wolfgang Grimm, ny filoha SKAL International Thailand dia niarahaba ny fifidianana an'i Kevin Rautenbach ho filohan'ny SKAL Krabi ary hanohy hanohana ny klioba amin'ny maha mpikambana mavitrika azy ao amin'ny birao.